I-Redgum Log Cottage - I-Airbnb
I-Redgum Log Cottage
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Corinne
U-Corinne Ungumbungazi ovelele
Ngokubukwa kwentaba okumangalisayo, ama-kangaroo aklaba emnyango wakho kanye nomlilo wezingodo ovulekile, i-Redgum Cottage idala isikhala sokuhlehla esigungwini esimatasa sempilo yesimanje.
Ikotishi likunikeza amahektha angama-60 ehlathi elihle lendabuko njengendawo yakho yokubalekela eyimfihlo. Indawo yokuphumula futhi uxhumane kabusha nezinjabulo zokuphila ezilula, ukuphuma kwelanga okujabulisayo, ukushona kwelanga okukhazimulayo kanye nesikhathi sokuphumula esizuzwe kahle konke okubekwe phansi kwe-Grampians National Park.
Njengoba ufika e-Redgum Log Cottage uzozizwa wamukelekile futhi wazi ukuthi ufikile endaweni eyingqayizivele nenhle ukuze uphumule futhi ujabulele uhlobo lokuphunyuka lwasemaphandleni oyohlale ulukhumbula.
Leli kotishi elakhiwe ngesandla livele ezintweni eziningi ezigaywe kabusha nezivuselelwe njengama-redgum log slabs agcinwe emahlathini, amakhabethe ekhishi likaphayini wase-New Zealand kauri pine atholakala ku-St Arnaud Flour Mill endala. Ngisho nokushisa kwelanga ku-Range Hood kuvela e-Australia eyakhiwe ngo-1925 i-H.V.McKay, i-‘Sunshine’ yokuvuna okusanhlamvu.
4.91 · 139 okushiwo abanye
Ama-Cottages aseduze ne-Halls Gap Zoo futhi eduze ne-Fallen Giants Winery. I-Grampians National Park iyindawo yobuhle bemvelo obumangalisayo enamathrekhi ohambo amaningi kanye nezimpophoma ongazivakashela ngenkathi izinze lapha kumakotishi. I-Hall Gap idolobha linezindawo eziningi zokudlela nezitolo ezizohlinzeka izidingo zakho.
Sihlala esizeni esakhiweni sokwamukela izivakashi ngakho-ke sizokubingelela lapho ungena futhi sizobe sikhona ukuze sikusize uma udinga noma yiluphi olunye usizo ngesikhathi uhlala.
Izilimi: 中文 (简体), Deutsch